ကော့စမော့ အနီရောင်အရွေ့ ၇ - ဝီကီပီးဒီးယား
ကော့စမော့ အနီရောင်အရွေ့ ၇
ကိုဩဒိနိတ်: 10h 00m 58.005s, +01° 48′ 251″
CR7 အား အနုပညာရှင်တစ်ဦး၏ ပုံဖော်ချက်
လေ့လာရေး ဒေတာ (Reionization epoch)
10° 00′ 58.005″
၁၂.၉ ဘီလီယံ အလင်းနှစ်
Galaxy Cosmos Redshift7is reported to be three times brighter than the brightest distant galaxy known up to the time of its discovery and to contain some of the earliest first stars that produced the chemical elements needed for the later formation of planets and life as it is known.
ကော့စမော့ အနီရောင်အရွေ့ ၇ (COSMOS Redshift 7, Galaxy Cosmos Redshift 7, Galaxy CR7 CR7) သည် အနီရောင်အရွေ့ များပြားသည့် ဂယ်လက်ဆီဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ CR7 သည် သက်တမ်းအရင့်ဆုံး အဝေးဆုံးမှ ဂလက်ဆီတစ်ခုပင်တည်း။ ယင်းသည် ကမ္ဘာမြေမှ အလင်းနှစ် ၁၂.၉ ဘီလီယံ ဝေးကွာသည့် ကြယ်စုတန်း Sextans တွင် တည်ရှိသည်။ ယင်းဂယ်လက်ဆီသည် မဟာပေါက်ကွဲမှု စပြီးချင်း ဖွဲ့တည်ခဲ့ပြီး စကြာဝဠာ၏ ပထမဆုံးမျိုးဆက်ကြယ်များ ပါဝင်သည်။ စကြာဝဠာသည် သက်တမ်း ၈၀၀ မီလီယံနှစ်ခန့်ရှိချိန်၌ သက်ရှိဇီဝအတွက် လိုအပ်သော ဓာတုပစ္စည်းများ ကြယ်တာရာများ ဂြိုဟ်များ စသည်တို့ကို ဖွဲ့တည်စေခဲ့သည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ ၁.၄ ၁.၅ ၁.၆ "Evidence For POPIII-Like Stellar Populations In The Most Luminous LYMAN-α Emitters At The Epoch Of Re-Ionisation: Spectroscopic Confirmation" (PDF) (4 June 2015). The Astrophysical Journal. doi:10.1088/0004-637x/808/2/139. Retrieved on 17 June 2015.
↑ ၂.၀ ၂.၁ Overbye၊ Dennis။ "Astronomers Report Finding Earliest Stars That Enriched Cosmos"၊ New York Times၊ 17 June 2015။ 17 June 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Staff (17 June 2015)။ ESO1524 — Science Release - Best Observational Evidence of First Generation Stars in the Universe။ European Southern Observatory။ 17 June 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Staff (17 June 2015)။ Brightest galaxy and first-generation stars။ Earth & Sky။ 17 June 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Pittalwala၊ Iqbal (17 June 2015)။ Astronomers Find Best Observational Evidence of First Generation Stars in the Universe။ University of California, Riverside။ 17 June 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကော့စမော့_အနီရောင်အရွေ့_၇&oldid=707525" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၀ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၇:၄၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။